Dingana goavana amin’ny sehatry ny fitsaboana Olona iray nahatohitra ny aretina SIDA
Minisiteran’ny fahasalamana Malagasy Manjaka tanteraka ny kinamanamana
Manjaka tanteraka ny « Népotisme » na resaka kinamanamana sy fiaviana eo amin’ny fandraisana mpiasa eo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamana Malagasy etsy Ambohidahy.
Ady amin’ny aretina homamiadana Hanampy antsika i Inde
Tonga nanatitra ny taratasy maniraka azy ho masoivohon’i Inde eto Madagasikara tetsy amin’ny lapan’Iavoloha omaly alarobia 15 mey , ny ambasadaoro vaovaon’ity firenena ity, Abhay Kumar.
Fizaham-pahasalamana maimaimpoana Nahasarika olona marobe ny fiangonana Advantista
Nosokafana tamim-pomba ofisialy omaly alatsinainy 13 mey tetsy amin’ny Parvis hotel Analakely, hifarana anio talata ilay fizaham-pahasalamana maimaimpoana karakarain’ny fiangonana Advantista mitandrina ny andro fahafito mitondra ny lohateny hoe :
Fitsaboana ny aretin’ny voa Misy ny tetikasa hananganana hopitaly eto Antananarivo
Mihamitombo hatrany amin’izao ireo olona mararin’ny voa eto amintsika. Raha manodidina ny 70 isa eo ho eo ireo mpikambana ao anatin’ny FMIR na ny federasionan’ny marary voa eto Madagasikara,
Tetikasa ara-pahasalamana “IMPACT” Vatsian’ny Amerikanina vola 32 tapitrisa dolara
Hamatsy vola tetikasa fanatsarana ny famatsiana sy fanapariahana kojakoja miampy fanafody ho an’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza, ady amin’ny tazomoka ary fandrindrana fiainam-pianakaviana i Etazonia, ka vola mitentina 32 tapitrisa dolara anatin’ny 5 taona no haompana amin’izany.
Hopitaly HJRA Hohatsaraina ny famatsiana fanafody
Anisan’ny mampitaraina ny mpanjifa hatrany tato ho ato ny fisian’ny filaharana amin’ny fividianana fanafody ao amin’ny toeram-pivarotam-panafody eo anivon’ny hopitaly HJRA Ampefiloha.
Tolotra fahasalamana ho an’ny daholobe Ny 8%-n`ny Malagasy no misitraka izany
Tsy mbola marisika manao fiahiana ny fahasalamana ny Malagasy. Ny 8%-n’ny olona eto amintsika ihany no misitraka ny “mutuelle santé”
Nambarana vondrona manampahaizana tany Seattle Etazonia omaly talata 5 martsa fa nisy olona mitondra ny otrikaretina VIH/ SIDA ka nandresy izany.
Ity no olombelona faharoa voaporofo ara-tsiantifika fa nahatohitra ity areti-mandoza tsy mbola nahitana vaksiny fanefitra ity. Efa nisy olona iray tany Berlin (Allemagne) folo taona lasa izay nahatohitra ny SIDA, izao indray dia nisy olona hafa izay raha ny fantatra dia nanaraka fitsaboana tany Londres (Grande Bretagne). Ny mampitovy ireto olona roa ireto izay notazonina ho tsiambaratelo moa ny mombamomba azy ireo dia noho izy ireo samy nanaovana fandidiana manokana mba hanoloana ny tsokan-damosina. Ka raha ny fanadiihadiana sy ny fanazavana azo dia ny tsokan-damosina nampidirina tao amin’izy ireo no nanana singa nahavita nanohitra ny VIH/SIDA. Tsy azo ambara anefa hoe sitrana tanteraka izy ireo, saingy salama, tsy farofy ary afaka miaina tsara tahaka ny olon-drehetra na dia voan’ny SIDA aza. Tsy hita intsony ilay otrikaretina rehefa natao ny fitiliana. Maro no velom-panantenana ny amin’izao ambara fa dingana iray goavana amin’ny fitsaboana ny SIDA izao, izay mamely olona 37 tapitrisa maneran-tany.